NGABA UKUPHELA KUKARICK NOMORTY KWIXESHA LESI-5 KUHULU OKANYE KWI-HBO MAX? - IINDABA
Ngaba iRick and Morty's Ixesha lesi-5 lokugqibela kwiHulu okanye kwi-HBO Max?
Ukuqubha kwabantu abadala ngokulandelelana, uRick noMorty, usasaza isiphelo sayo sexesha lesi-5 ngokuhlwanje ngeCawa, ngoSeptemba 5. Isiphelo sidlala kumabonwakude nge-11. EMpuma / Pacific. Kodwa uyakwazi ukubukela ixesha le-5 iziqendu 9 kunye ne-10 kwiHulu okanye kwi-HBO Max? Impendulo inzima kancinci, ke funda ngalo lonke ushicilelo oluncinci.
I-'Rick and Morty 'yeSizini yesi-5 yokuGqibela inokuJongwa ngokuBukhoma kwiHulu ngeTV ebukhoma
Ukuba i-Hulu yeyona nkonzo yakho ithandwayo yokusasaza ukubukela isiphelo seRick and Morty sexesha lesi-5, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka uyijonge kwiHulu ngeTV ebukhoma ukuba unqwenela ukubona isiphelo sihlala. Ayizukuhlala phaya kubaboneleli abaqhelekileyo beHulu.
IHulu nge-TV ebukhoma yinkonzo yeprimiyamu. Inika amajelo e-TV angama-65 +, kunye nokuDada kwabantu abadala kunye neNethiwekhi yeKhathuni. Unokuzama inkonzo ngenkonzo yasimahla yeentsuku ezisixhenxe. Nje ukuba ubhalisele le nkonzo inkulu, ungabukela uRick kunye noMorty kumatshini okhethiweyo, ukusuka kuRoku ukuya kwi-Apple TV ukuya kwiAmazon Firesticks, iXbox, iNintendo Shintsha, iiTV ezilungileyo, kunye neefowuni ze-Android okanye ze-iOS. okanye iipilisi.
Awunakho ukubukela isiphelo kwi-HBO Max ukuba ungaphakathi e-U.S, kodwa i-HBO ingayiMoya kwamanye amazwe
Awunakho ukubukela iRick kunye neMorty isizini yesi-5 isiqendu 9 okanye 10 sihlala kwaye kwamsinyane emva koko kwi-HBO Max ngaphakathi eUnited States. Akukho phaya kwi-HBO Max kodwa. Nangona abanye beveza, njengeSouth Park, banokudlala kwiHBO Max okanye eHulu kusuku olulandelayo emva kokuba besasazwe kumabonakude, akunjalo ngeziqendu zikaRick noMorty.
Ukuba uhlala ngaphandle kwe-rustic e-United States, nangona kunjalo, ke qinisekisa kunye nejelo lakho lendalo le-HBO ukufumanisa ukuba isiphelo sikaRick kunye noMorty sexesha lesi-5 siyakube sisasaza kwi-HBO okanye ngokuqinisekileyo ngomnye wabanikezeli bokusasaza. I-HBO Asia, umzekelo, idlala iziqendu ezitsha kwinkonzo yeHBO Go yokusasaza ngeMivulo.
I-HBO Nordic isasaza iziqendu zikaRick kunye neMorty nazo.
#RickAndMorty Baza kuthatha ikhefu elifutshane lokucwangcisa i-adventures ye-intergalactic elandelayo kwaye babuye ngo-Septemba 6
Siyaqonda ukuba kubuhlungu, ke into enye esiza kuyenza kweli nqanaba kukukhwaza, wubba lubba dub-dub kwindawo ephezulu yemiphunga yethu!
Iziqendu zokugqibela ezibini zidlala ngoSeptemba 6. pic.twitter.com/LB8rtn71Uq
-I-HBO Nordic (@HBOnordic) Nge-16 ka-Agasti 2021
I-HBO Max kunye neeNkonzo zeHulu eziqhelekileyo ngekhe zifumane isizini 5 kude kube ngu-2022
URick noMorty baqala ukuphuma apho kwiHulu nganye kunye neHBO Max ngoNovemba 2020. Ixesha elidlulileyo, bekumalunga neenyanga ezintandathu emva kwexesha lesine liphelile ngaphambi kokuba iziqendu ezitsha bezikhona kwiHulu eqhelekileyo okanye kwiHBO Max.
Inverse ixeliwe ukuba lonke ixesha lonyaka lesi-5 linokongezwa kwilayibrari yokuhambisa u-Hulu ngolunye usuku kwiveki yokuqala ka-Februwari 2022, okanye mhlawumbi ngasekupheleni kukaJanuwari 2022. Ixesha lesi-5 liqikelelwe ukuba longezwe kwi-HBO Max kwangolo suku longezwayo kwinkonzo eqhelekileyo kaHulu. Ukuchasana kuqikelelwe oku kuya kwenzeka ngenye imini phakathi kukaJanuwari 30 noFebruwari 6, 2022.
Ukuba awufuni ukulinda kwaye unayo ikhebula okanye i-satellite ye-TV yokubhaliselwa kwe-pc, kunokwenzeka ukuba lonke ixesha uzabalaze ubukele kwi-intanethi ku-AdultSwim.com apha. Kodwa unokufuna ukuba kungene ikhebula ukuze ujonge ku-AdultSwim.com okanye kwiNkqubo yoKuqubha yaBadala. Unokuthenga lonke ixesha kwiTunes okanye kwiAmazon Prime Video ukuba awufuni kulinda, nangona kunjalo awunaso esinye isisombululo sokuyibukela kwi-intanethi.
Izigaba: Inetflix Amazon-Prime Iindaba
Zingaphi izihlandlo uFrank sinatra watshata
yimini yekrismesi evulekileyo yovuyo
suzy umdlalo udumbile udade
amadama okuqubha kwidola yosapho
Isiteshi semozulu se-alexandra steele wikipedia